August 23, 2019 - Myitter
ထိန်းဂမြို့ တွင် ချင်းအမျိုးသားတစ်ဦး၏ ကျွဲ ၁၅ ကောင်သေဆုံးပြီး မိမိကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကြိုးဆွဲသေဆုံး
August 23, 2019 Myitter 0
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုးရမ်းပြည်နယ် ထိန်းဂမြို့ တွင် ချင်းအမျိုးသားတစ်ဦး၏ ကျွဲ ၁၅ ကောင်သေဆုံးပြီး မိမိကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကြိုးဆွဲသေဆုံး – အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုးရမ်းပြည်နယ် ထိန်းဂမြို့တွင် ၂၃ / ၈ / ၂၀၁၉ ခုနှစ် မနက် ၅ နာရီလောက်တွင် ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့ရှိ […]
ဦးသန်းရွှေ မိသားစုမှ မိမိပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မီတာခမပေးဆောင်ဘဲ အသုံးပြု
ဦးသန်းရွှေ မိသားစုမှ မိမိပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မီတာခမပေးဆောင်ဘဲ အသုံးပြု နေပြည်တော်တွင် ဦးသန်းရွှေ ၏ သား/သမီးများဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ အောက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့်အတူတင်ပြလိုက်ပါသည်။ အသုံးမကျသော လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ကြီးအပါအ၀င် အင်ဂျင်နီယာများကိုလည်း ရှုံ့ချလိုက်ပါသည်။ လက်ရှိနေပြည်တော်တွင် ဦးသန်းရွှေ သားသမီးများလုပ်ကိုင်နေသော စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့ ၁။ မြတ်မင်္ဂလာဟိုတယ်တွင် 1000 KVA Transfer (၁)လုံး […]
၉နှစ်အရွယ် တတိယတန်း ကျောင်းသူလေး ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပြီး..အလောင်းအား ရေတွင်းပျက် အတွင်းပစ်ချ လက်စဖျောက်မှူ
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ဟင်္သာတခရိုင်၊မြန်အောင်မြို့နယ် ထောက်ကြန့်အုပ်စု ဆင်ပုံရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှု(ရက်ရက်စက်စက်) ။(အမှုဖြစ်နေ့စွဲ…၂၁.၈.၂၀၁၉) အသတ်ခံရသူမှာ အဘ ဦးမြရွှေ၊အမိ ဒေါ်မာမာအေးတို့၏သမီးထွေး.. ၉နှစ်အရွယ် တတိယတန်း ကျောင်းသူလေး မသူဇာအေး ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူကလေးမလေးရဲ့ မျက်နှာမှာ ခုတ်ဖြတ် ဒါဏ်ရာ ၆ချက်၊ဝဲဘက် ကျောမှ ရင်ဘတ်သို့ ထုတ်ချင်းပေါက် […]
ခြေ/ဥပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီကို “ချောင်ချိုချောင်ကြား သွားမယ့်လူတစ်စု” ဟု ဗိုလ်ကြီးပြော
ခြေ/ဥပြင်ဆင်ရေး ၄၅ ဦးပူးပေါင်းကော်မတီကို “ချောင်ချိုချောင်ကြား သွားမယ့်လူတစ်စု” ဟု ဗိုလ်ကြီးဒေါ်အေးသဉ္ဇာကျော်ပြော နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၃ (သတင်းတမန်) တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီးဒေါ်အေးသဉ္ဇာကျော်က ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ရေး အခန်း ၁၂ ကို “ဖြူးနေအောင်ဖောက်လုပ်ပေးထားတဲ့လမ်းမကြီး” ဟု ခိုင်းနှိုင်းခဲ့ပြီး NLD က ဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသည့် ခြေ/ဥပြင်ဆင်ရေး […]
ဒီနေ့မနက် ကျွန်မဆေးခန်းရှေ့မှာ ရပ်နေတုန်း ရှေ့တန်းပြန်စစ်ကားကြီးတွေ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆေးခန်းရှေ့မှာ လာရပ်တယ် ကားပေါ်ကနေ စစ်သားကြီးတွေဆင်းလာတယ်”
ဒီနေ့မနက် ကျွန်မဆေးခန်းရှေ့မှာ ရပ်နေတုန်း ရှေ့တန်းပြန်စစ်ကားကြီးတွေ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆေးခန်းရှေ့မှာ လာရပ်တယ် ကားပေါ်ကနေ စစ်သားကြီးတွေဆင်းလာတယ်” ဆရာမလေး ကွမ်းယာဆိုင်ဘယ်နားရှိသလဲ”ကျွန်မ က ဒီဘက်လမ်းကြားမှာ ရှိတယ် လို့ပြောတော့ စစ်သားကြီးက သူ့ နားတဖက်ကို လက်ကလေးနဲ့ကာပြီး ” ကျွန်တော် နားတွေအူနေလို့မကြားရဘူး” […]
အချိန်​​ပေးပြီးဖတ်​​ပေးပါမိတ်​​ဆွေ.. အနာဂါတ်​လူ့​ဘောင်​တစ်​ခုလုံးအတွက်​ သိပ်​ကိုလိုအပ်​​နေပြီထင်​ပါတယ်​.. ***စာဖတ်ပျင်းပြီး အထွေထွေဗဟုသုတ အားနည်း၍အစားအ​သောက်​ကျိန်​စာ သင့်နေသောရွှေမြန်မာများ.. ရွှေမြန်​မာတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းက ၅၇ နှစ် အာရှမှာ အနိမ့်ဆုံးဘဲ.. အသက် ရှင်သန်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့အစားအ​သောက်​တွေကို ကျန်းမာ​ရေးအသိနဲ့ မချင့်ချိန်ဘဲစားသောက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးထိခိုက်ရုံမျှ မကဘဲကိုယ့်​ရဲ့ရင်​​သွေး​လေး​တွေ၊ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်​ပါ အညွန့်ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ်..**(အထူးသတိချပ်​ကြပါ) ဈေးသက်သာလို့ […]
Switzerland မှာ သူနေတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အလည်လာတယ်။ မြန်မာပြည်ရောက်တော့ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးဘာဘာချိုကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော့်အကြောင်း ကြားတယ်။ တကယ် ဟုတ် မဟုတ် ကျွန်တော့် ဖေ့စဘွတ်ကို ကြည့်တယ်။ မြန်မာလို ရေးထားတယ်။ သူမဖတ်တတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ စကားပြန်တစ်ယောက် ရှာတယ်။ ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်။ သူ […]
🔯ချစ်​သူ မိမိထံအမြန်​ဆုံးပြန်​လာရန်​ အစီအရင်​🔯 ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ ထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား? အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့အိမ်ရှင်မများစိတ်သောကရောက်နေပြီလား? 🔯 လိုအပ်​တာက​တော့- 👉စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ် 👉ဆန် ၁ဘူး 👉 ကွမ်းရွက်​ ၃ရွက်​ 👉ဖ​ယောင်းတိုင်​ […]
သူရိယကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ
လမ်းခွဲတယ်လို့ တစ်ဖက်သတ်ကြေငြာခြင်းအတွက် သူရိယကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဆုအိမ့်စံ ဒီကနေ့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် သူရိယနဲ့ ဆုအိမ့်စံ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ပရိသတ်တွေက အံသြတကြီးဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရိယဘက်ကနေ ထိုသတင်းကို စတင်ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆုအိမ့်စံဘက်ကနေ အခုလိုပဲ ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ “သူရိယ၏ လမ်းခွဲသတင်းအား […]
လျှပ်စစ်မီး ရပြီး မီတာခ တပြားမှ မကုန်တဲ့ စာသင်တိုက်ကြီး (သံဃာ ၃၀၀ ကျော်ရှိပါသည်)
လျှပ်စစ်မီး ရပြီး မီတာခ တပြားမှ မကုန်တဲ့ စာသင်တိုက်ကြီး (သံဃာ ၃၀၀ ကျော်ရှိပါသည်) “ဘုန်းတော်လေးကျောင်း မီတာခဘယ်လောက်လို့ ကြားလဲဘုရား” ဒရိုင်ဘာက ရုတ်တရက်မေးသည်။ ခဏချင်း သူ့မျက်နှာကို လှန်လှောဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာကိုမူ မတွေ့ရ။ (ကြောက်ရသည်လေ) “တစ်ပြားမှ မကုန်ဘူး တကာ” “ဟင် ဘယ်လိုဖြစ်..” […]
COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်၊ ကုသရေးများအတွက် ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀) ပံ့ပိုးကူညီ ….